Askari Mareykan ah oo lagu dilay gudaha Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAskari Mareykan ah oo lagu dilay gudaha Soomaaliya
May 5, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Askari Mareykan ah oo lagu dilay gudaha Soomaaliya. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Askari katirsan ciidamada Mareykanka ayaa lagu dilay gudaha Soomaaliya, sida ay sheegeen taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika.
Bayaan kasoo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in askariga la dilay maalintii Khamiista intii lagu guda jiray howlgal ka dhan ah Al-Shabaab oo ka dhacay duleedka caasimada Muqdisho.
Bayaanka ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka ay qaadayeen howlgal la talin iyo caawimaad ah oo ay siinayeen ciidamada Soomaaliya.
April 23, 2017 Madaxweyne Farmaajo oo tagay magaalada Baydhabo
February 14, 2017 Cutub cusub oo ciidamo ah oo ka socda Burundi oo yimid Muqdisho si ay u badalaan cutub horey u joogay